Amacandelo kwiGadget yeActualidad
Iindaba zeGajethi ijolise ekunikezeleni indawo yokuhlangana yabo bonke abo bangabathandi bezixhobo, iikhompyuter kunye netekhnoloji ngokubanzi. Enkosi Ku Iqela lethu labahleli abaziingcali Siyakwazi ukubonelela ngesiqulatho somgangatho ophezulu kakhulu kwaye ngobungqongqo obuphezulu obufunekayo, obu Lixatyiswe kakhulu luluntu lwethu lwabafundi kwaye yinto ebalulekileyo eyahlula thina kukhuphiswano lwethu.
Siphuhlise umxholo wale webhusayithi ukusukela ngo-2005, ke siye sajongana nezihloko ezininzi ezahlukileyo. Ukwenza kube lula kuwe ukuba ufumane ulwazi olukhangelayo, ngezantsi sibonisa uluhlu lwezihloko apho iwebhusayithi yethu ihlelwe khona.
Vula izixhobo zekhompyutha
Iimuvi kunye nothotho
Umfanekiso kunye nesandi